मीनबहादुर श्रेष्ठः चाहेका थिए– डिपुटी गभर्नर, पाए योजना आयोगको उपाध्यक्ष « Pahilo News
मीनबहादुर श्रेष्ठः चाहेका थिए– डिपुटी गभर्नर, पाए योजना आयोगको उपाध्यक्ष
प्रकाशित मिति : 8 September, 2016 7:00 am
२३ भदौ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी–निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले डिपुटी गभर्नर बन्न निकै जोडबल गरेका थिए । तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएको हुँदा राष्ट्र बैंकमा एक मात्र माओवादीनिकट कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले डिपुटीका लागि पहल गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा गभर्नर बनेका डा. चिरञ्जीवी नेपालले एमालेकै अर्थमन्त्री भएका कारण एमाले निकट चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पन्छाउन सक्ने कुरा भएन, माओवादी केन्द्रलाई पन्छाएर कांग्रेसको कोटाबाट शिवराज श्रेष्ठलाई डिपुटी गभर्नर बनाए ।
अब आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि श्रेष्ठ मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रममा पुगेका छन् । पहिला राज्यमन्त्री सरह रहेको योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई डा. युवराज खतिवडाका लागि गत वर्ष सरकारले मन्त्री सरह बनाएको छ । अब श्रेष्ठको मर्यादाक्रम ९ नम्बरमा पर्दछ भने गभर्नरको मर्यादाक्रम १४ औं नम्बरमा छ । गभर्नरको मर्यादाक्रम त आयोगको सदस्यभन्दा पनि तल हुन्छ । हिजोसम्म आफूले कारिन्दा ठानेका श्रेष्ठले अध्यक्षता गर्ने आयोगको बजेट÷स्रोत कमिटीको सदस्यको हैसियतमा गभर्नरले भाग लिनुपर्नेछ ।
०४२÷४३ सालतिर नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाइसक्थे । तर, विदेशमा अध्यययन गर्न गएका उनले ३ वर्ष असाधारण बिदा लिएका हुँदा राष्ट्र बैंकबाट ०७४ को माघतिर अवकाश पाउनेवाला थिए ।
ई-मेल : [email protected]/[email protected]m